Outlook dia handray ny tsara indrindra amin'ny Accmpli sy Sunrise | Androidsis
Nikarakara i Microsoft mividy ny fampiharana Sunrise ary avy eo mahazo Acompli, mpanjifa mailaka avo lenta. Ho an'izay mihazakazaka hanana serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifany, ireo ao amin'ny Redmond dia mitady fomba hanolorana kalitao bebe kokoa raha azo atao izy ireo tsirairay avy ary ireto rindrambaiko roa azo ireto dia afaka mamolavola ny hafa, ary koa mitambatra amin'ny iray amin'ireo fahamendrehana lehibe tahaka ny taloha hatrizay.
Amin'izao fotoana izao dia manambatra ny Sunrise sy Acompli i Microsoft mamorona kinova tsaratsara kokoa momba ny hoe Outlook ho an'ny Android sy iOS. Fiovam-po mahagaga hanome valiny farany toa ny Outlook vaovao izay tsy ho ela dia ho tonga ao amin'ny app Android sy fivarotana lalao video, raha ny fanazavana, havaozina tsara mandritra ny fotoana fohy.
1 Ny tsara indrindra amin'ny Acompli sy ny fiposahan'ny masoandro ao Outlook
2 Andininy amin'ny faritra maro amin'ny fampiharana
Ny tsara indrindra amin'ny Acompli sy ny fiposahan'ny masoandro ao Outlook
Raha toa i Microsoft dia efa niavaka noho ny hatsarany lehibe amin'ny rindrambaiko miaraka a fampiharana isan-karazany lehibe izay tonga tamin'ny volana lasa teo amin'ny Android, izao no tadiavinao raiso ny dingana farany hanolotra mpanjifa mailaka izay tena manasarotra an'i Google tenany miaraka amin'ny Gmail lehibe.
Ity kinova ity dia tonga anio amin'ny a fanavaozana ny app Outlook amin'ny iOS ary izany no ho iray izay haneho hatraiza ny fikasan'i Microsoft hiaraka amin'io fangezan'ny zava-mahatalanjona roa toa an'i Acompli sy Sunrise io.
Ny zava-misy mety hisy paikady lehibe fividianana rindranasa roa izay tsara indrindra amin'ny sehatra misy azy ireo ary avy eo ny iray izay mandray ny valiny tsara indrindra, zavatra hitranga amin'ity Outlook vaovao ity izay manana endrika hita maso ary manome fiasa misongadina tsara toy ny bokotra kalandrie ary ny fikajiana sasany manatsara ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny ambaratonga hafa.
Andininy amin'ny faritra maro amin'ny fampiharana
Material Design dia iray amin'ireo singa lehibe indrindra amin'ny kinova Android, izay mbola tsy misy. Ny sasany amin'ireo antsipiriany dia hetsika kalandrie ireo izay nomena fampahalalana bebe kokoa ary amin'ny ankapobeny, dia andao lazaina fa manana endrika hita maso mampionona kokoa izy io noho ny an'ny Outlook tamin'ny androm-piainany.
Ny talen'ny vokatra Microsoft ihany, Pierre Valade, dia manazava ny fomba hitondran'izy ireo ny fiposahan'ny masoandro tsara indrindra raha mijery ho an'ny iOS sy Android, izay midika, araka ny nambarany, fa hisy ny fotoana handaozany ny Sunrise. Avelany hiasa mandritra ny fotoana fohy izy io, saingy ny toerana nametrahan'izy ireo ny tanjona dia any Outlook izay ahitan'izy ireo olona 30 tapitrisa mahery mampiasa azy isan'andro.
Ka amin'izao fotoana izao dia samy ny ekipa Acompli sy Sunrise miasa miaraka amin'ny fampiharana mitambatra eo ambanin'io fitaovana io ihany, Outlook Mobile. Amin'ny fanavaozana ho avy dia ho hitantsika ny fampidirana ny 3D Touch ary ny sasany amin'ireo fiasa vaovao dia hahatratra ireo sehatra finday roa be mpampiasa indrindra amin'ny fotoana iray, nefa tsy manadino ny fampidirana ao amin'ny Windows 10 Mobile satria tsy nisy raha tsy izany.
Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatsika ny daty manokana izay Microsoft mba hanala ny Sunrise, na dia hitahiry azy mandra-pahatongan'ny fampidiran-dresaka rehetra ao amin'ny Outlook aza. Ka efa te-hanandrana an'io Outlook vaovao io izahay, noho ny sary atolotra avy amin'ny iOS sy Android, dia toa tsara. Noho ny fitsaboana amin'ny rindrambaiko izay tazomin'i Microsoft dia azo antoka fa maro ny olona manomboka mampiasa azy io ary tena mieritreritra raha toa ka mahasolo ny Gmail izy tenany na ilay Inbox izay tonga niaraka tamin'ny fanambarana mitovy amin'izany isan'andro ihany koa.
Fotoana mahafinaritra iray antenainay fa afaka manatona tsy ho ela ary hahafantatra toy izany ny fanjavonan'i Sunrise hanome lalana an'i Outlook nohavaozina tsara fa mila ampahany amin'ny fanahiny amin'ny resaka traikefa mpampiasa sy asa tsara ny fananana kalitao tsara indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Natambatr'i Microsoft ho lasa Outlook nohavaozina tanteraka ireo fampiharana Acompli sy Sunrise
Omar almiron dia hoy izy:
Tsy mandresy lahatra ahy mihitsy izany, mijanona amin'ilay kinova taloha aho.-
Valiny tamin'i Omar Almiron